ဆန်းဆန်းပြားပြား ဂျပန်စကား !!!! - JAPO Japanese News
ဆန်းဆန်းပြားပြား ဂျပန်စကား !!!!
ကြာ 19 Mar 2020, 16:08 ညနေ
ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေသာမက၊ ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင် သေသေချာချာပြန်စဥ်းစားကြည့်ရင် နားမလည်နိုင်တာတွေ လက်တွေ့ဂျပန်စာမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို 八百屋Yaoya လို့ခေါ်ပါတယ်။
ငါးရောင်းတဲ့နေရာကိုတော့ 魚屋sakanaya ၊ ပေါင်မုန့်ရောင်းတဲ့နေရာကို パン屋Pan-ya လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒါဆို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့နေရာကိုကျတော့ 野菜屋Yasai-ya လို့ခေါ်ရမှာ ပုံမှန်ပဲမဟုတ်ဘူးလား ?
အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို 青物（あおもの）လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ 青 အအို (အပြာ) နဲ့ 緑 မိဒိုရိ (အစိမ်း) ကို မူလဂျပန်ဘာသာစကားမှာ အတူတူပဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
“ 青အအို လို့ပြောရင် အစိမ်းရောင်လို့ မြင်ပေးနော် ”
ဒါကြောင့် 青物Aomono အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အရာကိုရောင်းလို့ 青物屋（あおものや）Aomonoya လို့ခေါ်ခဲ့ပြီး၊ အဲ့ဒီကနေ အလယ်ကစကားလုံးကို ဖြုတ်လိုက်ကာ
青屋（あおや）Aoya ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။屋 ya ဆိုတာက ဆိုင်ကိုပြောတာပါ..
အဲ့ဒီကနေမှာ 八百屋 Yaoya ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။
八百Hachi hyaku မှာလည်းအဓိပ္ပါယ်ရှိပါသေးတယ်။
နံပါတ် ８ဆိုတာက ကံကောင်းခြင်းတွေပြည့်နေတဲ့ ဂဏန်းဖြစ်ပြီး၊ 八百(Eight hundred) မှာတော့ “ အလွန်အမင်းအမြောက်အများ ” ဆိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ အသီးအနှံတွေကို အမြောက်အများစီတန်းထားတဲ့အတွက် 八百屋 Yaoya လို့ နာမည်တွင်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
“ ラ ” စာကြောင်းကနည်းတယ်။
ဂျပန်စာကိုလေ့လာနေတဲ့ သူတွေသိများသိနေမလားလို့တော့ မသိဘူး။
ဂျပန်ဘာသာစကားမှာ “ ア ” စာကြောင်း၊ “ カ ” စာကြောင်း အစရှိသဖြင့် ရှိတယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံးကြတော့မှ “ ラ ” စာကြောင်းက လိုက်လာတယ်။
အဲ့ဒီ စကားလုံး ၅ လုံး ပါတယ်။
ဥပမာ ဂျပန်စကားလုံးတစ်လုံးကိုနားမလည်ဘူးဆိုပါစို့၊ အဲ့ဒီအချိန် အဘိဓာန်စာအုပ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အတန်းလိုက်လေးရှာရမယ်ပေါ့….
“愛” အအိ ဆိုတဲ့ အချစ်စကားလုံးကိုရှာမယ်ဆိုရင် “ အ ” ဆိုတဲ့အတန်းလိုက်ကို အဘိဓာန်မှာ စီထားပေးတယ်။
အတန်းလိုက် စကားလုံးတွေကိုစီထားပေးပေမဲ့၊ “ ラ ” ရ ဆိုတဲ့ အတန်းမှာတော့ တော်တော်လေးကို နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒါက မူလဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ ပြဿနာပါပဲ။
和語（わご）Wago ၊ 大和言葉（やまとことば）Yamato language ဆိုတဲ့ ရှေးဂျပန်စာတွေမှာဆိုရင် “ ラ ” ရ နဲ့စတဲ့ စကားလုံးတောင် မရှိပါဘူးတဲ့….
ဒါကြောင့် “ ラ ” ရ နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်လာတာကတော့ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ဘာသာစကားတွေကနေ မွေးစားထားတာပါတဲ့…….
“々” ကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲ ?
ဒါကတော့ ပုံမှန်သုံးနေကြစကားလုံးပါ။ ဒါနဲ့ ဘယ်လိုဖတ်ရလဲ စာဖတ်သူတို့ သိကြပါသလား?
佐々木 လို့ရေးထားရင်၊ “ささき” Sasaki လို့ဖတ်ပါတယ်။ ဒါဆို အမြဲတမ်း “ ဆ ” ဆိုပြီးသုံးရင်မှန်သလား ?
代々木 လို့ရေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ “よよぎ” Yoyogi ဖြစ်သွားပြန်ပါရော တဲ့….
တကယ်တော့ အဲ့ဒီစကားလုံးလေးက ရှေ့ကအသံထွက်ကို နောက်တစ်ကြိမ် repeat ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့တစ်လုံးတည်းမှာတော့ အသံထွက်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ နောက်ပြီးသူဟာ Kanji ဆိုတဲ့ တရုတ်စာလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူးတဲ့…
畳字（じょうじ）Joji လို့ခေါ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့အလှဆင်အက္ခရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရည်ခန့်ညာတယ်ဆိုရင်二枚目 Nimaime လို့ပြောကြပါတယ်။
နောက်ပြီး ဟာသပြောတဲ့လူရွှင်တော်တွေကိုတော့ 三枚目Sanmaime လို့ခေါ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက一枚目Ichi-mai-me ကြတော့ သိပ်ပြီးမသုံးကြပြန်ပါဘူးတဲ့……
အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းတွေက Kabuki ကနေအစပြုခဲ့ပါတယ်။
Kabuki ဆိုတဲ့ ဂျပန်ရိုးရာပြဇာတ်လိုမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားကို 一枚目 လို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီး၊ ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ အချစ်တွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့သူ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့သူကိုကြတော့ 二枚目 လို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆို Kabuki ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသားကိုကြည့်ဖို့လာကြတာမဟုတ်ဘဲ၊ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ အရံမင်းသားကိုကြည့်ဖို့လာကြတာက ပိုများနေပါသေးတယ်တဲ့…….
အဲ့ဒီကနေ ဆက်ပြီးတော့မှ ပရိသတ်တွေကိုဟာသလေးတွေနဲ့ အရွှန်းဖောက်နိုင်တဲ့ သူကိုတော့ 二枚目 လို့ခေါ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
総スカン（そうすかん）Sōsukan ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကားလား?
အားလုံးဆီကနေ အမုန်းခံရတာကို 総スカンSōsukan လို့ခေါ်ပါတယ်။
ခတခနနဲ့ရေးထားတဲ့အသံထွက်က အင်္ဂလိပ်အသံထွက်နဲ့ scan ဖတ်တယ်ဆိုပြီး တော်တော်လေးတူနေပေမဲ့ တကယ်ကတော့ ဂျပန်ဘာသာစကားပါပဲ။
“総” ဆိုတာက အားလုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သဘောမကျဘူး ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး၊ “総” နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် အားလုံးကသဘောမကျဘူး ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုပေါက်သွားပါတယ်။
စကားမစပ်ベース Base ဆိုတာကလည်း Kansai ဒေသရဲ့ အသုံးအနှုန်းပါနော်…….
ဘာကြောင့်虹（にじ）Niji ဆိုတဲ့ သက်တံ့စကားလုံးလေးမှာ 虫Mushi လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးကောင်လေးကပါနေရတာလဲ?
ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ဖြာထွက်နေတဲ့ လှပတဲ့သက်တံ့
虹 ဒီစကားလုံးကို Kanji နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် 虫 ဆိုတာလေးက ပါနေတယ်နော်…… ဥပမာ ဘယ်အပင်ကိုပဲဖြစ်ပါစေ နာမည်ရေးလိုက်တာနဲ့ “木” Ki ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာ ပါပြီးသားပဲဖြစ်နေပြီး၊ ငါးလို့ပြောလိုက်ရင်လည်း ဘယ်ငါးနာမည်မှာမဆို “魚” ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကပါဝင်နေပါတယ်။ ပိုးကောင်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ၊ ပိုးကောင်အနွယ်ဝင်ထဲမှာ “虫” Mushi ဆိုတဲ့ Kanji လေးကပါပြီးသားပါ
ဒါနဲ့ပဲ သက်တံ့ဆိုတာ ပိုးကောင်အနွယ်ဝင်ပဲဆိုပြီး စဥ်းစားသွားရစေပါတယ်။
虹သက်တံ့က 龍နဂါးအနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်၊ နောက်ပြီး 龍နဂါးက 蛇မြွေအနွယ်ဝင်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ 蛇မြွေလို့ခေါ်တဲ့ 蛇( Hebi ) Kanji မှာ 虫ပိုးကောင်စကားလုံးလေးကပါဝင်နေတဲ့အတိုင်း မြွေဟာလည်းပဲ ပိုးကောင်အနွယ်ဝင်ဆိုပြီး စဥ်းစားရစေပြန်ပါတော့တယ်………………………..
T Shirt ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး T ကိုယူထားတာပေါ့။ T Shirt ကိုဖြန့်လိုက်ရင် T ပုံသဏ္ဍာန်မြင်ရတဲ့အတွက် T Shirt လို့ခေါ်တာပေါ့။ စပို့ရှပ်လက်ရှည်ကိုတော့ ဂျပန်တွေက ဝိုက်ရှက်လို့ခေါ်တယ်။ လည်ပင်းက Y ပုံစံရှိနေလို့
ဝိုက်ရှက်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘဲ၊ အဖြူရောင်ဖြစ်နေလို့ ဝိုက်ရှက်လို့ခေါ်တာပါတဲ့
ホワイトシャツ　→　ワイシャツ
White shirt → Shirt
ဂျပန်သာသာစကားကို ခက်ခဲအောင်လုပ်တဲ့အရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ စကားလုံးရဲ့ အသံထွက်ပါပဲ။
“၁” ကို ひとつHitotsu ၊ いちIchi ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးပြောင်းခေါ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှာ ၁ ရက်နေ့ရဲ့ အသံထွက်က “ついたち” Tsutachi လို့ဖြစ်သွားပြန်ရော…….
ဂျပန်မှာအရင်က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပြက္ခဒိန်တွေက 月齢カレンダー Moon age calendar လို့ခေါ်တဲ့ လပုံတွေဆွဲထားတဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ လတစ်လရဲ့ ပထမဦးဆုံးရက်မှာ လကိုမမြင်ရတဲ့အတွက် လ ရပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ “月立ち（つきたち）” Tsuki-tachi ဆိုပြီး စခေါ်ရာကနေ အသံထွက်ပြောင်းသွားပြီး “ついたち” ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ၁ ရက်နေ့ ကို “ついたち”
ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တောင် 二枚目Nimaime ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးပဲမှတ်မိတယ် !!! (ရယ်လျက်)
ဂျပန်လူမျိုးတောင်မသိတဲ့ ဂျပန်စကားလုံးတွေကို၊ အခုကနေစပြီး နည်းနည်းချင်းစီမိတ်ဆက်သွားပေးမယ်နော်…….!!!!
ဂျပန်လူမျိုးနဲ့ ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေက တူများတူနေသလား?
ငါးရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ခန်းဂျီး
ပွစိပွစိပြောတတ်သူလေးကို ဂျပန်ကဗျာနဲ့အရွှမ်းဖောက်ကြည့်မယ် !!!!
လက္ခဏာကို ပြောင်းလဲပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာရောက်ခဲ့သူ
ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ပန်းချီဆရာ 石崎 光瑤（いしざき　こうよう）
ဟာသလူရွှင်တော် Ken Shimura ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆုံးပါးသွားပြီး!!!
ဖြိုးပြောပြတဲ့ တိုကျိုမြို့နဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် !!!